Kolikoly, fisolokiana, fanaparitahana fitaovam-piadiana… : zandary 300 nanao fandikan-dalàna | NewsMada
Kolikoly, fisolokiana, fanaparitahana fitaovam-piadiana… : zandary 300 nanao fandikan-dalàna
Fandikan-dalàna, tsy fanarahana fitsipi-pifehezana, fanaovana kolikoly, fanapariahana fitaovam-piadiana… Manodidina ny 300 ireo zandary voakasik’izany, araka ny fanazavan’ny Komadin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ramiandrisoa Jean De Dieu Daniel.
“Tao anatin’ny enim-bolana voalohany tamin’ity taona ity, manodidina ny 300 any ho any ireo zandary nanao fandikan-dalàna. Izany hoe tsy nesorina tamin’ny asany fa ireo miditra any am-ponja sy voaroaka tamin’ny asany. Ny fandikan-dalàna no tena antony lehibe satria misy ireo nandika ny fitsipi-pifehezana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, misy koa ireo nanao fandikan-dalàna amin’ny maha teratany Malagasy azy ka migadra. Aminay rehefa migadra ny zandary dia miala avy hatrany ato anatin’ny zandarimariam-pirenena”, hoy ny Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ramiandrisoa Jean Dieu Daniel, omaly teny amin’ny Toby Jly Ratsimandrava nandritra ny fanaovam-beloma ara-miaramila ireo zandary handeha hisotro ronono.
Nohamafisiny hatrany fa tafiditra ao anatin’izany 300 izany ireo tratra nanao kolikoly, ny nanao fanodinkodinam-bola, ny fisolokiana ary ny fanaparitahana fitaovam-piadiana.
Tena manadio tanteraka ny zandary mihitsy, araka izany, ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nidirana lalina ny ady amin’ny kolikoly satria nojerena hatrany anatiny. Izany hoe tsy fanadiovana ny ety ivelany fotsiny fa hatrany ifotony mihitsy “Taloha raha namafa trano, izay hita maso ao an-trano ihany no nodiovina fa amin’izao fotoana izao na any ambany farafara na latabatra na ambony lalimoara sokirina daholo. Tsy ho vita ao anatin’ny iray andro ny ady amin’ny kolikoly. Niaraha-nahita fa tsy nisy kolikoly mihitsy tamin’ity raha ny fanadinam-panjakana hidirana eo anivon’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra”, hoy hatrany izy.
Tsy maharaka ny isan’ireo zandary…
Nilaza ity manamboninahitra ambony ity fa olona 3 000 fehezina zandary iray eto Madagasikara. Any andafy anefa efa 800 ka hatramin’ny 1 000. Izany hoe mbola lavitra izany ezaka izany. Antony, tsy ahafehezana ny tsy fandriampahalemana amin’ny faritra sasany izany, araka ny nambarany. Voafetra koa ny fisandrahaky ny zandary any ambanivohitra ka tsy maharaka.
Efa faritra fotsy amin’izao ny any Benenitra, Betioky amin’izao fotoana izao. Misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Dinabe sy ny zandary manao savahao ireo faritra mena amin’ny asan-dahalo. Tsy hoe tsy ahafehezana ny tsy fandriampahalemana ny tsy fahampiana ato amin’ny zandarimariam-pirenena fa ilaina ny fiaraha-mientana ao amin’ny fokonolona rehetra manoloana izay tsy fandriampahalemana izay, araka ny fanazavany hatrany.
Tsy araka ny fieritreretan’ny maro azy, araka izany, ny any amin’iny faritra Benenitra sy ny manodidina iny amin’izao fotoana izao noho ny fiaraha-miasa sy ny paikady niarahan’ny zandary amin’ireo mpiray dina any an-toerana.
Miisa 23 ireo zandary natao veloma ara-miaramila teny amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly. Isan’ireo natao veloma tamin’izany, ny Jly Pily Gilbain, kaomandin’ny zandarimariam-pirenena tamin’ireny raharaha nafampana teto amin’ny firenena ny taona 2009 ireny.